Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Tacsi: Xaaji Yuusuf Abdi Ibraahim illaahay ha unaxariisto
Tacsi: Xaaji Yuusuf Abdi Ibraahim illaahay ha unaxariisto
November 6, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Waxaa magaalada Addisababa ku geeriyoodey Xaaji Yuusuf Abdi Ibraahim oo ahaa masuul iyo muwaadhin shaqooyin badan kasoo qaybtey deegaanka aadna looga yaqaanay deegaanka gaar ahaan caasimadda Jijiga iyo gobolka Faafan.
Marxuum Xaaji Yuusuf waxuu hillaadii 1960kii ku dhashey magaalada Jijiga waxuuna waxbarashadiisii hoose illaa dhexe uu ku qaatey isla magaalada Jijiga. Marxuumka ayaa sanadkii 1977 kamid noqdey dadkii deegaanka u dhashey ee ka qaxey isla markaana nolol ka doontey dalka Soomaaliya halkasoo uu kasoo laabtey 1991 uuna la jaanqaadey isbaddalkii ka dhacay dalka Ethiopia.
Marxuumka ayaa shaqooyin u badan heer dagmo ka qabtey magaalada Jijiga isagoo noqdey du
qa magaalada Muqdisho muddana ahaa waxaana marxuumku uu hadda ahaa gudoomiyaha magaalada Ma’eyso waxuuna god golay isagoo ku magacaaban jagadaas.Marxuumka ayaa ifka uga tagay 9 Caruur ah 5 gabdhood iyo 4 wiil iyo laba xaas.
Waxaan illaahay uga baryeynaa in marxuumka janadii geeyo ehelkii iyo qarabaadii, ubadkii iyo guud ahaan shacabkana samir iyo iimaan ka siiyo.